Ukukhiqizwa nokucutshungulwa ubisi - yezindawo wezolimo. Kuyisinyathelo amandla in ukuqapha nokuhlola izinga impahla eluhlaza. Ukuze wenze lokhu, thina ukubala eziningi izinkomba, okuyinto eyenziwa usebenzisa imishini ekhethekile - ubisi analyzer.
Ubisi analyzer - idivayisi nokuhlola izinga ubisi. It ivumela ngokushesha futhi ngokunembile ukusetha nemingcele ezilandelayo: ukuminyana, iphesenti lokucuketfwe fat, khona izithasiselo futhi izinto eziyingozi, lo ingxenyenamba lactose, ezingeni asidi, izinga lokushisa probe, njll ...
Ubisi analyzer uqhuba ukuhlaziya umkhiqizo ngaphandle kokusebenzisa reagents zamakhemikhali. Lokhu kunikeza imikhiqizo ezihlanzekile futhi imvelo ihlolwe ngokuhlanganiswa esifundweni.
ubisi izinga analyzer livamise ukusetjenziselwa emapulazini, ethola amaphuzu kanye nemikhiqizo yobisi embonini yezokudla. Futhi, le divayisi ngokuvamile sisetshenziswa laboratories zocwaningo.
Universal onobuhle analyzers ivumela ukuhlaziywa amasampuli zonke izinhlobo imikhiqizo yobisi imiphumela olunembile kakhulu. ukulungiselela isampula Special ayidingekile. Imikhiqizo nge ukungaguquguquki viscous kungenziwa ngokushesha wafaka insimbi ngaphandle dilution ngaphambi.
analyzers okuzenzakalelayo kulinganiswa lokushisa okokuqandisa, conductivity kanye nendlela okwakheke ngayo ubisi.
Ukuba khona kumadivayisi Samandla kungaba kanyekanye sihlaziye nemingcele eziyisisekelo izinto zokusetshenziswa, lulwimi siphelile nemikhiqizo yobisi isiqedile.
Ubisi analyzer sinquma amapharamitha alandelayo:
Ngo ubisi: asidi titratable kanye kwabantu, lemali amaprotheni, fat, i-lactose, ukudla okuqinile, casein, urea, khulula fatty acid.
I ubisi kanzulu: inani skimmed ubisi ukudla okuqinile, Iphesenti of fat umtimba kanye ukudla okuqinile.
Ukhilimu, noshizi amangqanga kwezingane amafomula: lokuhlushwa fat, amaprotheni, ndaba elomile Somo.
I-yogurt neminye imikhiqizo yobisi isibilile: inani SNF, ushukela egazini, i-lactose, sucrose, fructose, acidosis acid, amaprotheni, fat, ukudla okuqinile Imininingwane.
Ngo kophudingi yobisi: carbohydrate jikelele, amaprotheni, ndaba ezomile, amafutha, SNF, i-lactose, glucose, fructose, sucrose.
I ushizi: usawoti okuhlushwa, inani SNF, amaprotheni namafutha.
Chitha Ubisi ukuhlaziya ngalezi zinkomba, ungasebenzisa umshini wobuchwepheshe zokukhiqiza yasekhaya.
Lokhu ultrasonic ubisi analyzer, sokunquma ngoba aqukethe amaprotheni amaningi, nangamanoni nonfat ezomile ubisi ukudla okuqinile. Futhi, le divayisi ikuvumela ukusetha ukuminyana futhi izinga lokushisa kwe-imikhiqizo yobisi.
Ubisi analyzer "clover-1" isebenza nge indlela esekelwe kokuqhuba izilinganiso ultrasonic obisini ngesikhathi esithile ukwakheka kanye lokushisa namagugu.
Ikhono ukukala eziningi nemingcele.
nobungane Environmental nokuphepha.
Edingekayo isampula ivolumu ukuhlaziywa - 20 cu. cm. Omunye ihora operation okuqhubekayo zedivayisi ingahlaziya amasampula 22.
Ingabe amathuba enkulu ubisi analyzer "clover-2". Izinyathelo kudivayisi inani amaprotheni, fat, ezomile ubisi ukudla okuqinile, i-lactose, inani non-amafutha ukulinganisela wanezela amanzi. analyzer Ubuye abekele kwezinga-qhwa futhi degree of homogenization ubisi.
Analyser "clover-2 'usebenza izindlela ezimbili. Uma ukhetha imodi lokuqala wenziwa ukuhlaziywa okusheshayo noma okusheshayo izinkomba lasemcoka eluhlolo ubisi izinga. In the mode yesibili, insimbi ngobuciko esiphezulu alinganise uhla egcwele izinkomba ubisi noshizi lonke.
Idivayisi "Klever-2" uyisibonelo ngcono. Idivayisi ifakwe isibonisi LCD nge imenyu control. Umsebenzisi ungakhetha mode ezifanele, bese usetha izilungiselelo ezidingekayo.
Idivayisi enikwe amandla amapayipi. Ukuze ukusetshenziswa Insimbi ukusetshenziswa emkhakheni umthombo wamandla lizwakala usikilidi imoto elula.
I analyzer ingaqalisa amahora 12. Imemori yangaphakathi 100 ilondoloza izilinganiso.
okusheshayo ukuhlaziywa isikhathi imizuzu 3.5. Ukuze enze lokhu test kudinga umthamo isampula 20 cubic metres. cm. Yokukala imodi yesibili sithatha imizuzu 5.5, futhi umthamo mass ihlaziye kufanele kube 200 cc. cm.
Ubisi analyzer "Laktan 1-4 M"
ukusebenza izici Good unesinye ukukhiqizwa apharathasi Russian - "Laktan". Imishini senzelwe ukuhlola ku zokuwuhluza esimweni kanye collective emapulazini, dairies emakhishini nase ubisi iqoqo amaphuzu.
"Laktan 1-4 M" has a ukusebenza ezibanzi Inani elikhulu. Isici esikhethekile idivayisi uyakwazi ukucacisa amaprotheni. Ukumeda wamaprotheni by indlela evamile kuthatha amahora angu-6. Kulokhu, kubalulekile ukuba sisebenzise izinto ezengeziwe.
"Laktan 1-4" Ultrasonic ubisi analyzer inikeza imiphumela nzile ihlaziya eziphansi nokuphepha inqubo. Idivayisi kuyinto elula futhi kulula ukuyisebenzisa. I analyzer uyakwazi ukusebenza kahle iminyaka eminingi.
Idivayisi kungenziwa exhunywe kwikhompyutha ukugcina futhi ukucubungula nesilinganiso wathola. Kufaka ngedivayisi kuyinto ikhebula yokuxhuma nesofthiwe.
Mini Analyser "Laktan"
Ukuze lokuhlola izinga ubisi amabhizinisi amancane athuthukile encishisiwe imodeli analyzer "Laktan 1-4 M Mini". Le divayisi compact inquma lokucuketfwe fat ubisi, umthamo wamanzi wanezela, ukuminyana futhi Ingxenye Somo.
analyzers Mini "Laktan" ubisi ukuze kuhlangatshezwane nezidingo amapulazi yangasese, ukusebenza esincane imikhiqizo yobisi. Bona babedalelwe kuphela sokulinganisa lokucuketfwe fat ubisi. Nokho, nomkhiqizi wedivaysi wakwazi ukwengeza izici ezimbalwa ezisetshenziswa ukuhlola ikhwalithi imikhiqizo yobisi. Ngakho-ke, "Laktan 1-4 M Mini" kuze kube manje ibilokhu isetshenziswa ngokuphumelelayo ezinkampanini ezahlukene, ingene esikhundleni imishini emikhulu.
Idivayisi enikeziwe nge icala plastic nge isibambo esithwele, okuyinto ibekwa apharathasi nezinsiza ezidingekayo ukuze ukuhlaziywa.
Ngokuyinhloko, ukuqeqeshwa apharathasi ukusetshenziswa kanye nokuhlaziywa zenzeke ngendlela elandelayo:
Engeza analyzer ubisi endaweni ekahle esimweni mpo. Kubalulekile ukuthi amaqabunga ezingeni futhi uzinzile. Ideal ukusebenzisa analyzer etafuleni noma iKhabhinethi.
Setha oyifunayo yokusebenza mode. Ngemva kokukhetha le iyunithi uzoqala ukuxoxa imodi. Ngokuvamile, Ukushisa kwenziwa ngokuzenzakalelayo ngemva kokuxhuma idivayisi kunethiwekhi. Ngemva Ukushisa, isibonisi ubonisa ulwazi mayelana ezilungele ukusebenza kwe-analyzer.
Gcwalisa esitsheni esikhethekile amasampuli lemali edingekayo ubisi wakufaka umshini ulandele iziyalezo ezikuyo. I lokushisa isampula kumele luhambisane amagugu Kunconywa.
Uhlaziyo usebenzisa futha ukuncela kufanele sifakwe ngesivalo tube bese ukhetha mode ezifanele. Khona-ke, gcwalisa lesi sitsha wokulinganisa ubisi ukubeka isampula iqoqo. Ngemva ukumuncwa ubisi emshinini uzoqala izinkomba nesilinganiso.
Ukuhlaziywa kwe-ubisi ngaphandle futha kwenzeka ne piston ngaphansi isenzo ubisi olunceleka ekamelweni wokulinganisa.
Ngemva kokuphothulwa yi ukuhlaziywa nesilinganiso siboniswa.
Ingabe bayaqhubeka besebenza ke ukuze ukuligcina lihlanzekile. Ngemva ukusetshenziswa, analyzer kufanele ahlanze kahle yokulinganisa chamber kanye amashubhu, landela imiyalelo.
Imifino, ukhukhamba, utamatisi ezikhulayo kule abamba ukushisa
Izinkukhu ningathwali? Yini angayenza kulesi simo,
Amazwe lwemfundo oluhle
Indlela ukukhetha dispenser amanzi isayithi?
Indlela ukuqeda ekucucuzeni?
"Hydrea": imfundo manual, izibuyekezo, izithombe, analogue
Honoré de Balzac: Biography futhi umsebenzi emfushane
Imvubelo "Evita": ukubuyekezwa. imvubelo elomile "Evita": imfundo, ekulungiseleleni